Nezvedu - Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.
Nhoroondo ye Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.iri muZiya Recycled Economic Industrial Zone, yakatanga kuvakwa muna Gumiguru, 2008, uye yakatanga kuvhura musika wepamba kubva kune vatengesi nemakambani ekutengesa.
Kubva mugore ra2010, takagadzira misika yemhiri kwemakungwa, panguva imwe cheteyo takagadzira timu yekutengesa kunze kwenyika.
Muna 2013, takatora chikamu muCanton Fair kekutanga, uye tikaramba tichiwedzera timu yedu.
Muna 2015, akatanga kutora chikamu munyanzvi dzekunze kuratidzwa.
Muna 2017, yakapindura kumutemo wenyika wekuchengetedza kwezvakatipoteredza,
Takatamira kuNational Recycled Economic Industrial Park---Ziya Industrial Park.Panguva imwe cheteyo takavandudza nekugadzirisa fekitari yekare kuti ibudise pamwe chete.
Nekugadzira, isu takagadziridza michina, yakashandurwa kubva kune yechinyakare dhizaini-yepasi stamping midziyo kuenda kune yakasanganiswa process otomatiki michina, yakavandudza zvakanyanya kugadzirwa.
Zvekudzorwa kwemhando, kambani inogara neiyo yekuongorora system zvakasimba, inozoongororwa pane zvemuviri zvivakwa uye makemikari kuumbwa nekukurumidza kana mbishi zvinhu zvapinda mufekitori;mukugadzira, inspector achaita ongororo isiri nguva uye nzvimbo yekuongorora;zvigadzirwa zvakapedzwa zvichayedzwa, kutorwa mafoto uye kuiswa pamwe neyekuongorora report neQC isati yaendeswa.Kuti uve nechokwadi chemhando yechigadzirwa, vimbisa kodzero dzevatengi uye zvaunofarira.
Muna 2019, kuti ienderere mberi kusimudzira musika, fekitori inosimbisa manejimendi, kutanga inogadzira hunhu manejimendi uye mashandiro hurongwa, kupedzisa kunyoreswa kwechiratidzo chekumba nekumhiri kwemakungwa, yakawana ISO9001 Quality System Certification uye CE Certification.
Kune manejimendi evashandi, isu tinotora "mhuri" senheyo, kwete kungofunga mutengi wega wega sehama, asi zvakare inosanganisira "mhuri" kune vashandi- kugovera hutano pazororo, kudzidziswa kwehunyanzvi hwakasiyana, kuronga vashandi vanofamba, mitambo, kuitira kuti. vashandi vanogona kunge vari mumamiriro emufaro ekushanda, vanoratidza pfungwa yemushandi wese wevaridzi, tora fekitori semhuri zvechokwadi.
Kune vatengi, isu tinogara tichitevedzera musimboti we "mhando hwaro, mukurumbira kukosha, sevhisi kunaka, mutengi wekutanga".Mukufamba kwemakore gumi nemaviri, takatevedzera hunyanzvi hwebhizinesi hwe "kuvandudza zvigadzirwa kuti zvifambire mberi, batanidza zvigadzirwa zvekare kuti zvigadzikane".Kudzikamisa musika uripo, nepo panguva imwe chete isu tichiramba tichiwedzera kusimba uye nekusimba.
Nekukwikwidza kuri kuwedzera kunotyisa mumisika yemukati neyekunze, tiri kutarisanawo nekumanikidzwa nematambudziko kubva kune ese maficha, asi isu tinogara takatarisa tsika ye "kumba" uye nekuvandudza nzira yekugadzira uye mhando yechigadzirwa.tinotenda kuti tichaenda ruoko nevatengi vedu vekare mune ramangwana, sangana neshamwari itsva uye uwane rutsigiro rwako.
Nhoroondo ye Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd. Vese nhengo, vanokugamuchirai zvakare "kumba".